Barnaamij Dhaqameed muddo socday oo Garowe lagu soo Gaba-gabeeyay – Radio Daljir
Barnaamij Dhaqameed muddo socday oo Garowe lagu soo Gaba-gabeeyay
Maarso 14, 2016 5:51 b 0
Bacaadweyn, Maarso 14, 2016 (Daljir) —Xarunta Jaamacadda PSU ee magaalada Garoowe ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey barnaamijkii soo noolaynta dhaqanka iyo farshaxanka ee kasocdey magaalooyinka Boosaaso, Qardho, Garoowe iyo Galkacyo.
Munaasabaddii lagu soo xirayey barnaamijka ayaa waxaa ka qaybgalay madaxda wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Puntland, maamulka Jaamacadda PSU, Madaxda Hay’ada USAID, Maamulayaasha jaamacadaha Garoowe qaarkood, ardayda Jaamacadda iyo xubnihii tartanka ka qaybgelayey.
Gudoomiyaha jaamacadda PSU Pro. Maxamuud Sheekh Xaamud oo kahadlayey madasha ayaa ammaanay gudigii gacanta kuhayey tartanka barnaamijka soo noolaynta dhaqanka iyo farshaxanka, wuxuuna balanqaaday in ka jaamacad ahaan ay sii wadayaan barnaamijkaani.
Madasha ayaa waxaa majaajilooyin dhaqanka kusaabsan kusoo bandhigay mid kamid ah kooxaha dhaqanka ee dhisan jaamacadda PSU, waxaana sidoo kale madasha lagu xardhay sawirro ka turjumayey dhaqanka Soomaaliyeed.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan Soocadde oo soo xirayey munaasabadda ayaa sheegay inuusan filayn in dhalinyarada Soomaaliyeed ay sidaan dhaqankooda heegan ugu yihiin, wuxuuna ka wasaarad ahaan u balanqaaday inay joogtayn doonaan tartamada noocaan oo kale.
Ugu dambayntiina wasiir Soocadde, agaasimaha wasaaradda Mowliid Abuukar Abkey, gudoomiyaha jaamacadda iyo gudigii barnaamijka ayaa abaalmarino isugu jirey shahaado sharaf, Lacag iyo abaalmarin gudoonsiiyey dhammaan dadkii tartanka ka qaybgalay.
Barnaamijkaani oo ay dhaqaalaha ku baxayey bixinaysay Hay’ada USAID, ayaa waxaa hirgelinaysay wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Puntland oo kaashanaysay Jaamacadda Puntland state University.
Shuban Biyood Dhowr Qof ku soo ritay deegaano ka tirsan gobolka Mudug